Maxay muhiim u tahay in la ilaaliyo posidonia oceanica? | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Ecology, Deegaanka
Oceanic posidonia Waxay caan ku tahay doorka ay ku leedahay xeebta iyo xaaladdeeda khatarta ah. Waxaa jira dad badan oo garanaya ama maqlay maqalka posidonia oceanica, laakiin ma garanayaan sababta saxda ah ee ay muhiimka u tahay iyo shaqada ay hayaan.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee laga ogaado posidonia oceanica waa in laga sooco caleenta badda. Posidonia maaha algae, waa geed hoostiisa mara. Waxay leedahay miro, ubax, caleemo, jirid iyo xididdo sida geedka caadiga ah. Ma rabtaa inaad ogaato markaa maxay muhiim u tahay in la ilaaliyo?
1 Oceanic posidonia
2 Muhiimadda posidonia oceanica
3 Maxaa saameynaya posidonia oceanica?
Posidonia oceanica waa warshad biyaha hoostooda mara oo dayrta xilliga dayrta waxayna soo saartaa miraha loo yaqaan "saytuunka badda". Waa warshad sawir qaade ah, taas oo ah, waxay u baahan tahay iftiinka qorraxda xitaa marka ay ku hoos jirto biyaha si ay u fuliso sawir-qaadis. Intaa waxaa dheer, posidonia waxaa loo qaybiyaa badaha iyagoo samaynaya seeraha badda.
Mid ka mid ah shaqooyinka posidonia ay leedahay ayaa ah noqo tilmaame wanaagsan oo biyo nadiif ah, maxaa yeelay waxay ku nooshahay oo keliya biyaha nadiifka ah. Iyagu iskama caabiyaan meelaha aadka u sumeysan, oo aan oksijiin lahayn, oo leh jahwareer badan ama leh waxyaabo dabiici ah oo xad-dhaaf ah. Waa warshad ku-meel-gaadh ah badda Mediterranean-ka, oo ay UNESCO ku dhawaaqday inay tahay Goob Hidaha Adduunka ah iyada oo ku qaddarinaysa faa'iidooyinka badan ee ay u leedahay deegaanka.
Muhiimadda posidonia oceanica
Mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee cawska badda ka baxa ay bixiyaan Waa inay bixiyaan biomass iyo oksijiin si loo abuuro deegaanno ku habboon badbaadada noocyo badan. Sidaa darteed, haddii posidonia ay gacan ka geysato noolaanshaha noocyo badan, xeebaha ay ku sugan yihiin maadooyinka 'phanerogams' waxay kordhiyaan kala duwanaanshahooda. Nidaamka deegaanka oo leh noocyo kaladuwan oo fara badan ayaa aad ugu nugul saameynta lagu soo saari karo.
Mid kale oo ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee posidonia waa taas oo ah yareynta nabaad-guurka ku dhacay xeebaha. Waxay tan ku sameeyaan iyagoo yareeya xaddiga jiifka ee la yimaada mowjadaha ku xaniban dhulka daaqsinka ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay sameeyaan caqabado ka dhan ah hirarka. Dhul-daaqsimeedka wuxuu soo saaraa inta u dhexeysa 4 iyo 20 litir oo ogsijiin ah maalintii mitir kasta oo laba jibbaaran, oo ka dhigaya mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee oksijiinta badda Mediterranean-ka. Qayb ka mid ah oksijiinkan ayaa lagu faafiyay jawiga dhulka inta lagu jiro xilliyada waxsoosaarka ugu badan.
Haddii aan bilowno inaan tirakoobno ​​tirada noocyada ka badbaada mahadsanid seeraha posidonia, waxaan haynaa ilaa 400 nooc oo dhir ah iyo ilaa 1.000 nooc oo xayawaan ah. Waxyaalahaas nool oo dhan waxay degaan ku leeyihiin seeraha posidonia. Sidaa darteed, ilaalinta cawskani waa mid muhiimad weyn leh haddii aan dooneyno inaan keydinno inta hartay noocyada lagu daray. Dhul-daaqsimeedka sidoo kale waa dhul wanaagsan oo ay ku tarmaan xayawaanka sida isbuunyada, kalluunka xiddigaha, mollusks, boqolaal kalluun, xeel-badeedyo iwm.
Qaar badan oo ka mid ah noocyada ku tarma seeraha posidonia waxay leeyihiin dano ganacsi oo aad u weyn, sidaa darteed burburintoodu waxay u horseedi doontaa dhibaatooyin ba'an xagga dhaqaalaha maxalliga ah ee ku nool kalluumeysiga. Dalxiiska quusitaanka ayaa lumin doona muhiimad weyn sidoo kale burburinta seeraha posidonia. Waxaa lagu qiyaasaa waxtarka dhaqaale ee dhulka cawsku ka baxo waxay joogaan 14.000 euro sanadkii hektar kasta.
Maxaa saameynaya posidonia oceanica?
Nabaad-guurka dhul daaqsimeedka ayaa ah mid aad u deg deg ah sababo la xiriira saamaynta ay dadku ku yeeshaan iyaga. Saamaynta sida wasakhda gunta hoose, xad-dhaafka maadada dabiiciga ah (taas oo saamaynaysa koritaanka saxda ah ee geedka) iyo kululaynta biyaha badda Mediterranean-ka ee ay sababtay isbeddelka cimilada ayaa ah qaar ka mid ah saameynta burburisa seeraha posidonia. Ka dib xagaaga kulul, heerka dhimashadu aad ayey u weyn tahay in khasaaraha aan lagu kabi karin koritaanka, taas oo aad u gaabis ah.
Mid ka mid ah ficilada aadanaha ee inta badan baabi'iya seeraha posidonia ayaa ah ku tumashada sharci darrada ah. Dhul daaqsimeedka ayaa sidoo kale lagu baabi'iyaa qashin qubka, qashinka, qashinka ay soo saaraan biyo dhaqashada, dhismaha xeebta, algae invasive, iwm.
Sidaad u aragto, dhirtaan faa iido badan ma leh inay difaacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Maxay muhiim u tahay in la ilaaliyo posidonia oceanica?
Guryaha alwaaxda, sida loo doorto, faa'iidooyinka iyo qasaaraha